Azia sy Pasifika - ALinks
Lahatsoratra momba ny Azia sy Pasifika
Pune dia iray amin'ireo ivon-toerana IT lehibe indrindra any India, miaraka amina orinasan-rindrambaiko IT marobe. Betsaka ny fanantenana ho an'ireo fresera IT ao Pune. Vokatr'izany, kandidà maro avy amin'ny lafivalon'i India no mirohotra mankany Pune
Jolay 12, 2021 Antika Kumari India, asa
Nahazo an'io zavatra io ho anao tokoa izahay, raha te hahalala momba ny asa tsara karama indrindra any Bangladesh. Izahay dia mijery ireo asa be mpitia indrindra, ny fomba ahazoana azy ireo, ary ny fomba hanombohana amin'ny lalan'ny asanao. Ao amin'ny
Firenena tsy misy Visa ho an'ny pasipaoro Bangladesh. Torolàlana haingana
Jolay 4, 2021 Karuna Chandna Bangladesy
Araka ny Index Passport Ranking Index, ny pasipaoro Bangladeshi dia mijoro amin'ny laharana faha-100. Izy io dia raisina ho iray amin'ireo pasipaoro ambany indrindra eto an-tany. Toerana 40 ihany izay ahitana an'i Indonezia, Dominica, Madagascar ary Seychelles no mahazo fidirana tsy misy visa. Ny pasipaoro Bangladeshi
Ahoana ny fomba hahazoana asa any Tashkent?
Jolay 2, 2021 Antika Kumari asa, Uzbekistan
Tashkent, fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe Chach (Persiana:), no renivohiny sy tanàna lehibe indrindra ao Ozbekistan, ary koa tanàna be olona indrindra ao Azia Afovoany. Any avaratra atsinanan'i Ozbekistan no misy azy, akaikin'ny sisintanin'i Kazakhstan. Afaka manampy ireo loharano voatanisa etsy ambany